चुनावी सर्ट फिल्मको ‘रफ’ कथा !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चुनावी सर्ट फिल्मको ‘रफ’ कथा !
सबै जना मिलेर आएपछि कुन असल, कुन खराब कसरी छुट्याउने ? त्यसैले तिमीहरुले ठीक गरिरहेका छैनौ है भन्न पनि कोही चाहिँदो रहेछ । नत्र खराब त भन्ने, तर चुनाव पनि उसैले जितिरहने हुँदो रैछ ।
वैशाख २४, २०७९ यज्ञश
टाढाबाट हेर्दा टुरिस्ट बसजस्तो लाग्ने एउटा बस अनकण्टार ठाउँमा गुडिरहेको छ । बस घरी नदी किनार त घरी जंगलको बाटामा हुइँकिइरहेको छ । बसले विभिन्न ‘मार्क’ र ‘माइलस्टोन’ पार गरिरहेको छ । तिनमा कुनै मन्दिर छन्, कुनै बूढो रूख छन्, कुनै चिहानघारी छन् त कुनै बन्द भएका अस्पतालका खण्डहर ।
बस गुडेको एक घण्टाजतिमा पहिलो स्टपमा रोकिन्छ । यो स्टपको छेवैमा मुर्दा जलाउने घाट देखिन्छ । यो स्टपबाट बसमा एउटा युवा यात्रु चढ्छ ।
ऊ चढेको आधा मिनेटमा बसले फेरि रफ्तार पकड्छ । बसभित्र केही युवा र धेरैजसो वृद्धवृद्धा यात्री छन् । दुई जना युवती र तीन जना युवा छन् । वृद्ध र वृद्धा भने १०–१५ को संख्यामा छन् । उनीहरूका लुगा हेर्दा यी अलि पुरानो समयका मानिस हुन् कि जस्तो भ्रम हुन्छ । केही वृद्धहरू त धोती कछाडमै छन् । यिनलाई हेर्दा यी कुनै सुदूर गाउँबाट आधुनिक सहरतिर आइरहेजस्तो लाग्छ ।
तर, फेरि उनीहरूका कुरा सुन्दा यी अहिलेकै समयका मानिस हुन् भन्ने बोध हुन्छ । किनभने उनीहरू यो समयको चिन्ता गरिरहेका छन् । उनीहरू यही समाजबारे छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूको लवज पनि मोटामोटी अहिलेकै चल्तीको छ ।
एक जना वृद्धले मुख खोले, ‘आज त समयमै पुग्नुपर्छ है । नत्र, लौ बाजे तपाईं पाँचै मिनेट ढिलो आउनुभयो भनेर फर्काइदिन्छन् ।’
सिटमा उनकै लहरमा बसेकी वृद्धा थप्छिन्, ‘यति लामो यात्रा गरेर आएको पाँच मिनेटले ढिला त हुनु भएन । ल, है चालक भाइ अलि छिटो गर्नुपर्‍यो ।’
ड्राइभर उनीहरूतिर फर्किएर भन्छ, ‘छिटो त गर्नु हुन्थ्यो । बस ठूलो छ, बाटो सानो । फेरि बस यताउता भएर तल खस्यो भने हामी सीधै माथि पुग्छौं नि !’
अर्का वृद्ध हँस्यौलो पारामा भन्छन्, ‘भोभो, सीधै माथि त जानु हुन्न । पाँच वर्षपछि बल्लबल्ल यो मौका आएको छ ।’
सबैले ‘हो–हो’ भन्छन् । अनि तिनै वृद्धाले थप्छिन्, ‘त्यसो भए हामीलाई बिस्तारै छिटो लगिदेऊ न त भाइ !’ उनको कुरा सुनेर यात्रीहरू हाँस्छन् ।
बस अनकण्टारबाट बिस्तारै फाट्टफुट्ट घर भएको/मानव बस्ती भएको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ ।
झ्यालको सिटमा बसेकी युवती बसलाई सूचित गर्छिन्, ‘अब हामी मानव बस्ती भएको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छौं ।’
सबै जना सतर्क भएझैं देखिन्छन् । एक छिन बसमा मौनता छाउँछ । सबभन्दा पछि बस चढेको युवा भने अन्य यात्रीहरूले दिएका कागजको तन्मयका साथ अध्ययन गरिरहेको छ । उसलाई हेर्दा लाग्छ, विचार र विवेचनामा यसको रुचि छ । यीमध्ये अध्ययनको धुरीण सायद यही केटो हो ।
बिस्तारै एक जना वृद्ध बोल्छन्, ‘बोल्नै नपाइने त होइन होला ! किन सबै चुप हो ?’
पछाडिको सिटबाट युवाको आवाज आउँछ, ‘त्यसो भए तिमी नै बोल न त बाजे, भोटचाहिँ कसलाई दिने विचार छ ?’
वृद्ध भन्छन्, ‘दुइटा कुरा । पहिलो त मेरो नाम बाजे होइन– श्रीमान् पाण्डे हो । र, दोस्रो कुरा यो गोप्य मतदान हो । तिमीलाई किन भन्ने ?’
बसमा फेरि एकपटक हाँसो गुन्जिन्छ ।
युवा भन्छ, ‘मैले त आदर गरेर बाजे भनेको श्रीमान् पाण्डे । तपाईंको जानकारीका लागि बताइदिऊँ, मचाहिँ सबभन्दा युवा उम्मेदवार जुन पार्टीले दिएको छ, त्यसैलाई भोट दिन्छु ।’
श्रीमान् पाण्डे सोध्छन्, ‘युवालाई मत दिन्छौ कि युवाका लागि काम गर्नेलाई ?’
उनको प्रश्नले युवा अलमलमा पर्छ ।
छेउको सिटमा बसेकी युवतीले थप्छिन्, ‘युवा भए न, युवाका लागि काम गर्छ ।’
उनको उत्तरले युवालाई राहत मिल्छ । उसले आनन्द मानेको देखिन्छ । धुरीण युवा अझै कागजताजहरू अध्ययनमै मस्त छ ।
यो सवालजवाफले उसको पनि ध्यान तान्छ । उसले टिप्पणी गर्छ, ‘यो त साह्रै फितलो तर्क भयो । त्यसरी हुने भए त नेपाल देश वृद्धहरूका लागि संसारकै सबभन्दा उत्तम देश हुनुपर्ने । सबैजसो ठूला नेता सत्तरी कटेका छन् ।’ उसको तर्कले फेरि एक पटक बसमा केहीलाई हँसायो । युवाहरू भने अलमलमा परे । कुरा त हो !
यो अलमल देखेर उसैले थप्यो, ‘बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विचार, नीति र कार्यक्रमको उमेरसँग होइन, सोचसँग मतलब हुन्छ । साह्रै वृद्ध कायाको मानिसले पनि युवा विचार बोकेको हुन सक्छ । र, साह्रै युवा उमेरको केटाकेटीले पनि साह्रै पुरातन, सडेगलेको विचार बोकेर हिँडेको हुन सक्छ । अब त आफ्नो चर्मचक्षु होइन, ज्ञानचक्षु उघारेर हेर !’
अबचाहिँ यो केटाले बसको माहोललाई धीरगम्भीर र अलि भारी बनाउन थाल्यो । आधाजति यात्रुले उसका कुरामा ध्यान दिन छोडेर झ्यालबाट बाहिर हेर्न थाले । यो देखेर उसले फेरि अर्को बोझ थप्यो, ‘बुझिएन मैले भनेको ? चर्मचक्षु भनेको भौतिक आँखा, जुन तिम्रो नाकको वारिपारि छन् । ज्ञानचक्षु भनेको ज्ञानको आँखा । विचार ।’
युवतीले आफूसँगै बसेकी अर्की युवतीलाई भनिन्, ‘ज्ञानलाई भारी किन भन्दा रैछन् भन्ने यसलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । एकै छिन सुन्दा त यस्तो छ, सधैं सँगै भयो भने कति भारी हुन्छ होला ?’ दुई जना मुख थुनेर हाँस्छन् ।
दोस्री युवती सानो स्वरमा भन्छिन्, ‘यो ज्ञानी मात्रै छैन । यसलाई आफ्नो ज्ञानको घमण्ड पनि उत्तिकै छ । त्यही भएर हामीतिर फर्केर पनि हेर्दैन । तर, यसलाई के थाहा छैन भने जसको ज्ञान अधुरो छ, त्यसले मात्रै ज्ञानको घमण्ड गर्छ ।’
बस अर्को एउटा स्टप आइपुग्छ । स्टपमा बस रोकिन्छ । एकजोडी वृद्धवृद्धा बसबाट ओर्लिन्छन् । ड्राइभरले उनीहरूतिर फर्किएर भन्छ, ‘फर्किने समय तपाईंहरूलाई थाहै छ, सधैंको समयमा यहीं आएर बस्नुहोला । फेरि ढिला भएर छुट्नुभयो भने म जिम्मेवार हुने छैन ।’
‘ल, ल थाहा छ,’ वृद्धले भन्छन् । उनीहरूलाई पूरै बसले बिदा गर्छ । ‘ल है, एकदम विचार गरेर, कसैको प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिनू । अनि टाइममै यहाँ उपस्थित हुनू,’ श्रीमान् ज्ञानचन्द्र बोल्छन् ।
वृद्धवृद्धाहरू हुन्छ भन्दै हात हल्लाएर अघि जान्छन् ।
एक युवतीले भन्छिन्, ‘अब सबै पार्टीका मान्छेले उनीहरूलाई घेरा हाल्छन् । उम्मेदवार र तिनका मान्छे टाढाटाढाको साइनो देखाउँदै आउँछन् । मतपत्र देखाउँदै आफ्नो चिह्नमा कसरी भोट हाल्ने भनेर एउटाले सिकाउँछ । अर्कोले कुर्ची ल्याएर बस्न दिन्छ । अर्काले पानी ल्याउँछ । अर्काले खाजा खानुहुन्थ्यो कि भनेर सोध्छ ।’ उनको कुराले बसमा मौनता छाउँछ ।
मौनता तोड्दै श्रीमती मनुमाया बोल्छिन्, ‘धन्न पाँच वर्षमा एक दिन भए पनि हामीलाई यिनले भाउ दिन्छन्, नानी । हामीलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ मान्छेजस्तो व्यवहार गर्छन् ।’
यो कुरा अध्ययनशील युवालाई चित्त बुझ्दैन । युवा बोल्छ, ‘यो हामी मतदाताको भ्रम हो । उनीहरूले हाम्रो त्यो महत्त्वको पनि हरण गरिसकेका छन् ।’
अर्का वृद्धले सोध्छन्– ‘त्यो कसरी ?’
‘चुनावअघि नै दलहरू आफैंआफैं मिलेर, आफ्नो चुनाव चिह्न नै छोडेर अर्काको चिह्नमा लडेको देख्नुहुन्न ?’
‘त्यो त बाबु धेरै पार्टी नमिली सरकार बन्ने गरी बहुमतै आउन नसक्ने अवस्था छ नि, तिमीले त्यो किन नदेखेको ?’ श्रीमान् पाण्डेले प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
‘कोको मिलेर सरकार बनाउँछन् भन्ने चुनाव भइसकेपछिको कुरा हो नि पाण्डेजी । यसको मतलब भोट हाल्नुअघि नै हामीहामी मिल्यौं अब तिमीहरूले ठप्पा मात्रै लाइदेऊ भन्दा त जनताले चुनेको भयो कि दलहरूले आफैंलाई चुनेको भयो ?’ युवाले जोसिएर भाषण ठोक्यो ।
‘यसले किन युट्युब नहेरेर पत्रिका पढिरहन्छ भनेको यस्तै अनेकवली सिक्दो रैछ,’ छेउको सिटमा बसेकी वृद्धाले भनिन् ।
‘कुरा माध्यमको होइन, आमा । कुरा त्यसबाट तपाईंले के सिक्ने भन्ने हो । मैले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नोस्,’ युवा कड्किँदै थियो फेरि अर्को स्टप आयो । यसपालि यही कड्केको युवाकै झर्ने पालो आएछ ।
ओर्लिंदाओर्लिंदै उसले बसतिर फर्किएर भन्यो, ‘मचाहिँ मतपत्रमा नो भोट पनि राख्न माग गरेर आउँछु । सबै खराब उम्मेदवार रहेछन् भने तिमीहरूमध्ये कसैलाई पनि चुन्दिनँ भन्ने पनि ठाउँ हुनुपर्छ ।’
ड्राइभरले हतार भएको संकेत गरिरहेको थियो । तैपनि, एक जना वृद्धाले मसिनो स्वरले प्रश्न गरिहालिन्, ‘त्यसो भए त भोटै नहाले भइहाल्यो नि, बाबु ! किन यत्रो दुःख गरेर आएको त ?’
प्रश्न सुनेर युवा फिस्स हाँस्यो । ‘यो कस्तो हो भने नि आमै, कसैलाई मनमनै तँ ठीक छैनस्, तँलाई म विश्वास गर्दिनँ भन्नु र उसको मुखैमा तिमी ठीक छैनौ भन्नुजस्तै हो ।’ यति भनेर केटो आफ्नो मतदान केन्द्र खोज्न हिँड्यो ।
‘कत्ति न विद्वान् हुँ भन्छ । अनि, यत्रो दुःख गरेर आइपुगेर भोट हाल्दिन भन्छ । यस्ताले किन आउनू ? बरु यसको सट्टा अर्को कोही आउँथ्यो नि भोट हाल्न !’ अघिकै युवती जंगिइन्, ‘भोलि खराब मान्छेले जित्यो भने यही तीन बित्ता उफ्रिन्छ ।’ सकल यात्रीगणले उनको कुरामा सहमति जनायो ।
श्रीमान् पाण्डे भने मौन छन् । एक छिनमा उनको वक् फुट्यो, ‘एउटालाई तिमी खराब छौ भनेर भन्नलाई अर्को खराबलाई भोट दिनु ठीक हो त ?’
यो प्रश्नको उत्तर दिनचाहिँ युवती अघि सरिन् । ‘सबै जना खराब मात्रै उम्मेदवार छन् त ? कि उम्मेदवार हुनेजति सबै खराब हुन् ?’
श्रीमान् पाण्डे अप्ठेरो मान्दै भन्छन्, ‘मैले सबै खराब भनिनँ । तर, सबै जना मिलेर आएपछि कुन असल, कुन खराब कसरी छुट्याउने ?’ फेरि उनैले थपे, ‘त्यसैले तिमीहरूले ठीक गरिरहेका छैनौ है भन्नलाई पनि कोही चाहिँदो रहेछ । नत्र खराब त भन्ने तर चुनाव पनि उसैले जितिरहने हुँदो रैछ ।’
‘सही र खराब कसरी छुट्याउने त ?’ एक जना वृद्धले मसिनो स्वरमा प्रश्न गरे । पढाकु युवा बसमा भएको भए उत्तर दिन उही अघि सर्ने थियो होला । केहीबेर बसमा मौनता छाउँछ । कोही नबोलेपछि श्रीमान् पाण्डे नै अघि सर्छन् । उनले लामो भूमिका बाँधे । लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन दलहरूले गरेको आन्दोलन, उनीहरूको योगदान, संघीयताले कसरी देशलाई आर्थिक भार पार्‍यो भन्ने विषयमा उनी बोल्छन् ।
उनको भाषणलाई रोक्दै मनुमाया भन्छिन्, ‘राम्रो नराम्रो छुट्याउने मेरो सजिलो तरिका छ । सबभन्दा कमजोर, अशक्त र गरिबका लागि कसले के कार्यक्रम ल्याएको छ ? आफ्नो एक टुक्रा जमिन, घर नभएका मानिसका लागि के छ ? फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई कस्तो व्यवहार गरिएको छ ? शुद्ध पिउने पानी पाइने कतिवटा सार्वजनिक धारा छन् ? निःशुल्क प्रयोग गर्नलाई कति सफा शौचालय छन् ?’ यति कुरा हेर्‍यो भने थाहा भइहाल्छ ।
उनको कुरामा श्रीमान् पाण्डे थप्छन्, ‘कुनै नगर वा सहर कति विकसित छ भनेर थाहा पाउन त्यहाँ हरियाली र खुला पार्क कति छन् ? फुटपाथ छ कि छैन, हेर्ने हो । नेपालमा जस्तो दुई जना दुईतीरबाट आयो भने गाडीले जसरी साइड दिनुपर्ने पनि फुटपाथ हुन्छ ? सडक बढाउनलाई फुटपाथ मास्ने पनि कहीँ विकास हुन्छ ?’ उनी जंगिन्छन् ।
त्यसमै जमुना थप्छिन्, ‘बटुवालाई सफा पिउने पानी छ कि छैन ? सफा सार्वजनिक निःशुल्क शौचालय छ कि छैन ? उम्मेदवारको ध्यान यस्ता कुरामा छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।’
उनको कुरामा पनि सबैले सहमति जनाउँछन् ।
सबैका कुरा सुनेपछि प्रश्न गर्ने वृद्ध झन् मसिनो स्वरमा बोल्छन्, ‘यो त बुझेँ कि, तर कुनचाहिँ उम्मेदवारले साँच्चिकै भनेको हो, कुनले झूट कसरी पत्ता लगाउने ?,’ यसले फेरि माहोललाई गम्भीर बनाउँछ । यो गम्भीर माहोललाई हल्का बनाउन श्रीमान् पाण्डे एउटा पुरानो जोक सुनाउँछन् । ‘तपाईंहरूलाई यो जोक साह्रै थोत्रो वा बेठीक पनि लाग्न सक्छ । तैपनि, म सुनाउँछु । एकफेर नेपालका एक जना ठूला नेताको मृत्यु भएछ । उनी ठूला नेता थिए, यसैले उनलाई यमराजको बैठक कोठामा पुर्‍याइएछ । उनले कोठाको भित्तामा विभिन्न किसिमका घडी देखेछन् । ती सबै घडीमुन्तिर एक–एक देशका नाम रहेछन् । उनले जति खोजे पनि त्यहाँ नेपालको घडी देखेनछन् । ती घडीहरूले बताएको समय र सुईको चाल फरक–फरक रहेछ । यो देखेर उनले यमराजलाई सोधेछन्– यहाँ सबै देशको घडी देखियो नेपालको रहेनछ नि !’
यमराजले भनेछन्, ‘यी घडीले समय होइन, कुन देशको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले कति झूट बोल्छन् भनेर देखाउने काम गर्छन् ।’
नेताले फेरि सोधेछन्, ‘तर, यहाँ नेपालको चाहिँ किन छैन त ?’
यमराजले भनेछन्, ‘त्यसले मलाई बेडरुममा पंखाको काम दिइरहेको छ ।’
यो जोकमा दुई जनाबाहेक सबै हाँसे । एक वृद्धले ढिलो गरी बुझे र भने, ‘मतलब नेपालका नेताले त्यति धेरै झूट बोल्दा रैछन् ?’
अर्की एक वृद्धालाई भने किन हाँसो लागेन भने उनले यो जोक पहिल्यै सुनेकी थिइन्, तर त्यसमा झूट होइन, घडीले भ्रष्टाचारको मात्रा देखाउँथ्यो ।
अन्त्यमा श्रीमान् पाण्डेले नै भने, ‘झूट हो होइन भन्ने पक्रिन साह्रै गाह्रो छ । यसका लागि अघिको केटाले भनेजस्तै ज्ञानचक्षु नै उघार्नुपर्छ ।’
एवंरीतले संवाद गर्दै जाँदा सबै यात्रीको मतदान केन्द्र आउँदै गयो । सबै ओर्लंदै गएर बस रित्तो भएपछि ड्राइभर चियाको खोजीमा भौंतारिन थाल्यो । चुनावले गर्दा सबै पसल बन्द थिए । यो ड्राइभरलाई चाहिँ कसैले चिया पनि सोध्नेवाला थिएन किनभने उसको मतदाता परिचयपत्र थिएन ।
बस फर्किने बेला भयो । हरेक मतदान केन्द्रछेउको स्टप पुगेर बसले यात्रीहरू टिप्न थाल्यो । टप्पटप्प सबै यात्री टिपिसकेपछि ड्राइभरले यात्रीहरूतिर फर्किएर भन्यो, ‘अब हामी कतै नरोकी एक्सप्रेस जान्छौं । तपाईंहरूका लागि चियाचमेनाको व्यवस्था उतै गरिएको छ । अब हामीले ढिला गरियो भने ढोका लागिसक्छ ।’
बस फेरि एकोहोरो कुँद्न थाल्यो । यात्रीहरू धम्म परेर बसेका छन् । सबैले मुख फुलाएजस्ता छन् । केही यात्री निराश, केही दुःखी र केही आक्रोशमा छन् । तर, कोही केही बोलिरहेको छैन । आउँदाखेरि उत्साहले आएका यात्रीहरूको मुहारमा अहिले भने त्यो कान्ति देखिँदैन ।
सबभन्दा युवालाई मत दिन्छु भन्ने युवाको वक् सबभन्दा पहिला फुट्यो, ‘सबका सब चोर छन् । फट्याइँको पनि हद हुन्छ नि !’
अर्को युवाले दिक्दार लागेको स्वरमा सोध्यो, ‘के भयो ?’
‘भोट हाल्नै पाइएन नि ! म पुग्नुभन्दा अघि नै मेरो नाममा अर्कैले भोट हाल्दिएछ भन्या । यति दुःख गरेर ह्वाँदेखि आइयो । यही एउटा अधिकार थियो, त्यो पनि जालीहरूले लुटे !’
उसको कुराले बसमा निस्तब्धता छाउँछ । सबै एकअर्काका मुखमा हेराहेर गर्न थाल्छन् ।
‘मैले पनि भोट दिन पाइनँ । मेरो नाममा पनि कसले हाल्दिएछ । एक घण्टाजति लाग्यो मलाई म मै हुँ भनेर प्रमाणित गर्न,’ युवती बोल्छिन् ।
‘अनि, आफूलाई प्रमाणित गरेपछि चाहिँ के भयो नि ? भोट हाल्न पायौ त ?’ श्रीमान् पाण्डे सोध्छन् ।
‘कहाँ पाउनु नि ! खालि मतदान अधिकृतले आएर हामीबाट गल्ती भयो भन्यो ।’
‘लापरबाहीको पनि हद हुन्छ,’ मनुमाया बोलिन्, ‘मेरो नाममा पनि अर्कैले भोट हालेछ ।’
उनको कुरा सुनेपछि जमुना नाम गरेकी युवतीले जुरुक्क उठेर यात्रीहरूलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘यो बसमा भोट हाल्न पाउने कोही छ ? छ भने हात उठाउनुस् ।’
बसमा झन्डै एक मिनेटको मौन धारणा भयो । कोही बोलेन । उनले फेरि सोधिन्, ‘मतलब कसैले पनि भोट हाल्न पाएन ? तर, नढाँट्नुहोला है म औंलाको मसी पनि हेर्छु ।’
घोर आश्चर्य, बसमा एउटा पनि हात उठेन ।
‘एक जनाले पनि भोट हाल्न पाएन ? फोकटमा मलाई दुःख दिएर ?’ यस पटक चकित पर्ने चालक थियो ।
उनको प्रश्नको कसैले उत्तर दिएन ।
‘दिनभरि तीनपत्तीमा भिड्न पाएको भए कम्तीमा पनि बीस हजार मार्ने थिएँ,’ उनी एक्लै बोलिरहे, ‘कत्ति न हामी मताधिकार र केके भनेर मेरो दिमाग भुटेर !’
उनलाई जवाफ दिन कोही अघि सरेन ।
‘मान्छेको भोट नै चोर्ने ? मान्छेको परिचय र अस्तित्व नै चोर्ने ?’ श्रीमान् पाण्डे क्षुब्ध भए ।
‘त्यति मात्र हो र ? यिनले त हाम्रो मन, मस्तिष्क र विचार नै चोरे । हामी जसलाई मत दिन चाहन्थ्यौं, त्यसको सट्टै अर्कैलाई हाम्रो नामबाट भोट दिए । हाम्रो सोचकै चोरी भयो ।’
बसमा केही बेर यो गलफत्ती चलिरहन्छ ।
अन्त्यमा चालकले नै फेरि चलाखी देखाउँछन् । पछाडितिर फर्किएर उनले यो बहसलाई बिट मार्ने गरी भन्छन्, ‘अब अर्को चुनावमा हाम्रो अधिकार हो भन्दै नआउनुहोला है । म आउनेवाला छैन, अहिल्यै भन्द्‌या छु ।’
बसमा फेरि मौनता छाउँछ ।
‘हामी मरिसकेका भए पनि आफ्नो हक खोज्दै चुनावमा फर्केर आउँछौं । मरेका मान्छेको भोट लिएर जित्नेचाहिँ ज्युँदा मान्छे हुन् त ?’ अहिलेसम्म मौन रहेकी भगवतीले प्रश्न गरिन्, ‘जुन ठाउँमा जसको पकड छ, त्यहाँ त्यही बाहुबली ?
श्रीमान् पाण्डेले अन्तिम शब्द बोले, ‘हाम्रै ठाउँ मात्रै हो कि अन्त पनि यस्तै होला ? भोट हाल्न परिचयपत्र पनि नचाहिने ? भोट घट्छ भनेर मरेका मान्छेको नाम पनि नहटाउने ?’
उनले यसो भन्नासाथ अचानक बस दृश्यबाट अलप हुन्छ । केहीबेर कल्याङमल्याङजस्तो आवाज आउँछ । तर, कतै देखिँदैन ।
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:४५
सञ्जाल सत्य, समाज मित्थ्या
पछिल्ला दशकमा नेपाली समाजमा चलेको सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति वैदेशिक रोजगार र यसले पठाउने रेमिट्यान्स तथा इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको गठजोडबाट पैदा भएको सामाजिक सञ्जाल हो । हाम्रो समाज र सामाजिक जीवनलाई धेरै प्रभावित कसैले पारेको छ भने त्यो यिनै चीज हुन् ।
देशको दुर्गति र दलतन्त्रको कब्जा देख्दा भाउन्न भएको युवाले आक्रोश पोख्ने कहाँ ? यस्तोमा ऊ सामाजिक सञ्जालमा बोल्छ । फेसबुकले यसै ‘ह्वाट्स अन योर माइन्ड’ सोध्दैन, यो मनजाल पनि हो ।
आश्विन २३, २०७८ यज्ञश
यो समयको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो ? प्रश्न जति जटिल लाग्छ, यसको उत्तर त्यति सहज छ– ह्वाट्स अन योर माइन्ड ? (तपाईंको दिमागमा के छ ?) यो प्रश्न सोध्छ, फेसबुकले । संसारभर छरिएका विभिन्न देश, भाषा र संस्कृतिका आफ्ना करोडौं प्रयोगकर्तालाई फेसबुकले हरेक दिन, हरेक घण्टा, हरेक मिनेट यही एउटा प्रश्न सोधिरहेको छ । र, मानिसहरू आ–आफ्नो उत्तरको खोजीमा जुटिरहेजस्ता लाग्छन् ।
भारतका प्रख्यात साहित्यकार राही मासुम रजा (जो मुसलमान थिए) ले लेखेको ‘महाभारत’ टेलिसिरियलको सुरुआती वाक्य छ– मैं समय हुँ । समयको अर्थ हो, निरन्तरता र सर्वव्यापकता । सम्बन्धजस्तो समयको कुनै भेटिने–छुट्टिने विन्दु देखिँदैन, त्यसैले यसको विछोड हुँदैन । हरेक चीज जसको सीमा हुँदैन, त्यो समय बन्छ, समयातीत बन्न पुग्छ । आजसम्म मानिसले प्रेम र धर्मलाई यस रूपमा कल्पना गरेको पाइन्छ । महाभारत समायातीत भएकैले होला, हिन्दुको पवित्र धर्मग्रन्थ मानिएको महाभारतमाथि मुसलमान साहित्यकारले पटकथा/संवाद लेखे ।
समय नपुग्ने कुनै ठाउँ छैन । जहाँसम्म गणना छ, जहाँसम्म सोच छ, त्यहाँ समय छ । यसको अर्थ हो, समय सब जान्दछ । समय सब चिन्दछ । समय सब देख्दछ । सायद, धेरै वर्षदेखि मानिसको रखवाली, खबरदारी र चियोचर्चो गर्दा समय थाकेर हो, अहिले यो काम सामाजिक सञ्जाललाई सुम्पिएझैं लाग्छ । मानिसको दिमागभित्र के छदेखि मानिस कहाँ जान्छ, के खान्छ, कसलाई भेट्छ, सबै चीजको रेकर्ड अब सामाजिक सञ्जाल र यसको सञ्चालन गर्ने एआई (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) सँग सुरक्षित रहन थालेको छ । सूचना र तथ्यांकको यस्तो भण्डार यसअघि कसैसँग थिएन ।
यस्तो लाग्छ, हामी सामाजिक सञ्जालकै लागि बाँचिरहेका छौं । यो हाम्रा लागि साधन होइन, साध्य हो । म आफैं यो सञ्जालको एउटा लती हुँ । सहरका ठूला मल, रेस्टुरेन्ट वा चिल्ला सडकमा जतासुकै भीड देखिन्छ– फोटोसुट गर्ने र टिकटक बनाउनेको । तपाईं सोध्नुहोला– यसमा खराबी के छ ? केही छैन । आफ्नो मन खोल्नुमा कुनै खराबी छैन, जबसम्म यसको कसैले दुरुपयोग गर्ने खतरा हुँदैन ! अझै यसको त सकारात्मक पक्ष पनि छ– यसले सबलाई समान रुपमा अभिव्यक्त हुने माध्यम दिएको छ । ‘सबका मालिक एक’ भनेजस्तो यो सबैको माध्यम भएको छ । कुनै अनकन्टारबाट घुमन्तुले पोस्ट गर्ने फोटो र मुख्यधाराको कुनै सञ्चारमाध्यमले पोस्ट गर्ने समाचारको लिंकसम्मको एउटै हैसियत र सम्भावना यसमा रहन्छ ।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपाली समाजमा चलेको सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति वैदेशिक रोजगार र यसले पठाउने रेमिट्यान्स तथा इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको गठजोडबाट पैदा भएको सामाजिक सञ्जाल हो । हाम्रो समाज र सामाजिक जीवनलाई धेरै प्रभावित कसैले पारेको छ भने त्यो यिनै चीज हुन् । राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनहरूले धेरै मानिसका लागि तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । जीवनको आयामलाई व्यापक र मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउन रेमिट्यान्स र सञ्जालले सबभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
नेपालमा इन्टरनेट (वाईफाई) को विस्तार, स्मार्ट फोनको उपलब्धता र लामो समय दमित अवस्थामा रहेका जनसाधारणको आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने हुटहुटीले परम्परागत रूपमा समाज भनिने स्पेसले गर्दै आएको काम सामाजिक सञ्जालको पोल्टामा पुर्‍याइदिएको छ ।
बोलै बोल माया हृदय खोलेर
केही हुँदैन मसँग बोलेर
टिकटक ट्रेन्डिङमा रहेको यो मुखडाले अहिलेको नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । देश दुनियाँका खबर थाहा पाउनेदेखि दुनियाँलाई आफ्नो खबर दिने स्थान यही बनेको छ । चिया पसलदेखि पानी पधेँरामा हुनेजस्ता गफगाफ अब यहाँ हुन्छन् । गसिपको नयाँ अड्डा पनि यही बनेको छ । म्यासेन्जर, भाइबर, फेसटाइमजस्ता एपहरूले टाढा–टाढा पुगेका आफन्तलाई आँगनमै ल्याइदिन्छन् । कुनै बेला आफ्ना बिदेसिएका प्रियको सम्झनामा गाइएको ‘पाइन खबर, घर फर्की आउनुहोस् मेरो हजुर’ जस्ता गीत चल्थे । अहिले ‘मेरो हजुर’ र ‘मेरी प्यारी’ २४ सै घण्टा भिडियो कलमा उपलब्ध हुन्छन् ।
साथीभाइ र प्रियजनका जन्मदिन हुन्, वैवाहिक वर्षगाँठ हुन्, अब उत्सव पनि यहीं हुन्छ । शुभकामनादेखि बधाई दिनेको एकातिर लर्को हुन्छ, अर्कातिर आफ्ना उपलब्धि दुनियाँलाई देखाउने उत्साह ! यो उत्साह कतिसम्म व्यापक भइसकेको छ भने हामी सानाभन्दा साना उपलब्धि पनि ठूलो हुनेगरी पोस्ट गर्न व्यस्त छौं । सवालचाहिँ– कतै यसले वास्तविक उपलब्धिको महत्त्व र भोक नै मेटाइदिने हो कि ? हामी जुन किसिमको मिडियोकोर (एकदमै कामचलाउ मात्रै) राजनीति, खेलकुद, सिनेमा, साहित्य, व्यवसाय चलाइरहेका छौं, यसबाट उन्नततिर जाने चाह नै समाप्त हुने हो कि ? सिंगो समाजको रुचि र परख गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो भने के हुन्छ ?
नेपाल देशभित्र धेरैवटा समाज छन् । काठमाडौं एउटै सहरभित्र धेरै समाज छन् । बालुवाटार र सिंहदरबार वरपरको समाज, बुढानीलकण्ठ र बालकोट वरपरको समाज तथा धोबीखोला, थापाथली पुलमुनिका बस्तीको समाज एउटै त होइन ? तर, समुच्चमा कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंको सपना र देशको सपनाभित्र यी सबै पर्छन् । प्रश्नचाहिँ सिंहदरबारको सपनाभित्र धोबीखोलाले कति ठाउँ पाउँछ भन्ने हो । यी समाजहरूबीचको विषमतालाई कसले तोड्न सक्छ ? राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भन समाजवादमा आधारित उदार र उदात्त शासन व्यवस्थाले त्यो विषमता हटाउन सक्छ, जुन व्यवस्थाको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने केवल भाषणमा मात्रै यस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालका लागि भने यी सबै समाज बराबर ! सबका विचारलाई उस्तै हैसियत र मान्यता सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त छ ।
नैतिकताजस्तै समाज पनि एउटा परिकल्पना हो । ‘स्यापियन्स’ मा युवल नोहा हरारी भन्छन्— समाज र देश ‘इम्याजिन्ड अर्डर’ मा चलेका छन् । यिनको ठोस आकार छैन । न यिनको कुनै वजन छ, न आकार–प्रकार न रूप–रङ । यी छन् भन्ने कुरा दिमागमा ठप्पा लागेकाले यी छन् । यिनको अस्तित्व केवल हाम्रो सोचमा छ । र, हाम्रो सोचमा यस्तो ठप्पा सजिलै लागेको होइन । यसका लागि विभिन्नखाले सत्ताहरूले धेरै लामो समय प्रयत्न गरेका हुन् । रुसोले भनेजस्तो स्वतन्त्र जन्मिएको मानिस अहिले जहाँतहीँ बन्धनमा छ । समाजको बन्धन, परिवारको बन्धन, नैतिकता र संस्कृतिको बन्धन, राजनीति र व्यापारको बन्धन ! हामी थाहै नपाई ती बन्धनलाई नै आफ्नो स्वतन्त्रता र उन्नति ठान्न अभिशप्त भइरहेका छौं कि ? र, यसैले हामी नयाँ–नयाँ ठप्पा लगाउँदै गइरहेका छौं कि ?
कोरोना महामारीले एकातिर समाजको पुरानो चालचलनलाई ठप्प बनाइदियो भने अर्कातिर इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाललाई सबैभन्दा प्रभावशाली बनाउन पनि भूमिका खेल्यो । एक समय यस्तो आयो, पूरै संसार समेटिएर मानिसहरूका मोबाइलबाट प्रकट हुन थाले । सिनेमा त्यहीं, साहित्य त्यहीं, समीक्षा त्यहीं, समाचार त्यहीं, लोकाचार त्यहीं ! कुनै समय राजा–महाराजाका जन्मदिन भव्य रुपमा मनाइन्थ्यो, संजालले सबैलाई अब त्यो हैसियत प्रदान गरेको छ । हरेक दिन बिहानै फेसबुकले एउटा लिस्ट पठाउँछ, आज क–कसको जन्मदिन छ भनेर । ८–९ नबज्दै तपाईंको वाल शुभ सन्देशहरूले भरिइसकेको हुन्छ । के यो सामाजिक व्यवहार होइन ? कसैका बच्चा जन्मिएकामा बधाईदेखि कसैका आफन्तजनको बिदाइको शोकसम्म यही मञ्चमा प्रकट हुन्छन् ।
कोरोनापछि त स्कुल पनि यहीं, कलेज पनि यहीं, उद्घाटन पनि यहीं, महाधिवेशन पनि यहीं ! कोरोनापछि एउटा शब्द निकै चल्यो– सामाजिक दूरी । खासमा भौतिक दूरीको कुरा यो थियो । तर, यसले नजानीकनै सामाजिक दूरीकै पैरवी गर्‍यो । र, मानिसको निकटताजति सञ्जालमा स्थापित गरिदियो ।
कुनै जमानामा युधीर थापाका किताब एकै परिवारमा पाँचवटा बिक्थे रे, यसका विक्रेता रत्न पुस्तकका गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार । किनभने, सबैलाई पढ्न मन लाग्ने, तर यसमा हुने वयस्क विषय र प्रस्तुतिका कारण एउटै सेयर गर्न नमिल्ने । ‘त्यसो भएपछि सबैले किन्थे, परिवारका अरू सदस्यसँग लुकाएर पढ्थे,’ उनले भनेका थिए ।
मोटामोटी टिकटकमा त्यस्तो ट्रेन्ड छाएको छ । यसमा परिवारका सबै छन्, आ–आफ्नो रुचिअनुसारका कन्टेन फलो गर्छन्, तर एकले अर्कालाई फलो नगर्न सक्छन् । फेसबुकमा शब्द र तस्बिर छन्, टिकटकमा छ भिडियो । स्मार्ट फोनको एउटा अर्को टुलको यहाँ सबभन्दा राम्रोसँग उपयोग हुन पाएको छ । कोही आफैंले खिचेको भिडियोमा त कोही ‘चरी जेलैमा...’ जस्ता गीतमा आफ्नो भावना र अभिनय प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, टिकटकले सबैलाई कलाकार र फिल्ममेकर बन्ने मौका दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक अर्थमा समाजभन्दा प्रगतिशील छ । यहाँ कसैको हैसियत र वंशावलीको खासै मतलब गरिँदैन । कसैको जाति र धर्मको खासै वास्ता छैन (धर्मकै राजनीति र व्यवसाय गर्ने भने यहाँ पनि छन्) । मानिस आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र प्रतिक्रिया दिन स्वतन्त्र छ । यसमा त आफ्नो परिचय नखुलाईकन पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ, टिप्पणी गर्न पाइन्छ । तपाईंले नागरिकता देखाइरहनु पर्दैन, कतै गएर तमसुक गर्नुपर्दैन । जस्ता ठूला र प्रभावशाली भनिएका मानिसलाई पनि यहाँ साना भनिनेले र्‍याखर्‍याख पार्न सक्छन् । कुनै गलत कुरा आयो भने त्यसविरुद्ध तुरुन्तै विरोधको लर्को देख्न सकिन्छ ।
यतिसम्म कि कुनै अखबार वा न्युज पोर्टलले केही गल्ती गरेको खण्डमा अब भोलिपल्ट होइन, तुरुन्तै माफी माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । साधारण मानिस यति शक्तिशाली सायद पहिले थिएन ।
यसका केही खतरा पनि छन् । अलग विचारकालाई सकिन्जेल गाली गर्नेको एउटा समूह छ । अरिंगालको पूरै दस्ता यसमा छ । पार्टीहरूले अब यसलाई नै युद्ध मैदान मानेर साइबर सेल गठन गर्न थालेका छन् । कुनै राजनीतिक मुद्दालाई प्रभावित पार्न संगठित तरिकाले यसमा हुने बहसहरूमा हस्तक्षेप हुन थालेको छ । र, व्यक्तिको गोपनीयता सबभन्दा बढी दाउमा लागेको छ । मानिसहरू निकै नै पारदर्शी भएर आइदिँदा त्यसका गलत असरप्रति जानकार नभएजस्ता देखिन्छन् । केही भने यसकै कारण हिंसा र यौन हिंसाको सिकार भएका पनि भेटिएका छन् । कसैका तस्बिर र परिचयलाई गलत उद्देश्यका साथ प्रयोग गरिएको पनि पाइएको छ । विज्ञापन र प्रपोगन्डाका लागि सबभन्दा प्रभावकारी थलो यो भएको छ ।
कतारको ५० डिग्रीको गर्मीमा रापिएर, मनैदेखि बाफिएर, आफ्नो देशले गरेको हेला सम्झिएर, देशको दुर्गति र दलतन्त्रको कब्जा देख्दा भाउन्न भएको युवाले आक्रोश पोख्ने कहाँ ? समाजले उसको कुरा सुन्दैन । किनभने समाजको सिंढीमा ऊ सधैं भुइँमा हुन्छ, सुन्ने ठूलाहरू सिँढीको माथिको पल्लामा । यस्तोमा ऊ यही सञ्जालमा बोल्छ । फेसबुकले यसै ‘ह्वाट्स अन योर माइन्ड’ सोध्दैन, यो मनजाल पनि हो ।
अझै केहीका लागि त यो आम्दानीको स्रोत पनि हो । केही सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक मुद्दालाई यसले नै विस्तारित गर्ने काम गरेको छ । तर, यसको समस्या के छ भने सञ्जालमा जति आक्रोशित भए पनि आन्दोलन नै गर्न भने तपाईंले सडकमै उत्रिनुपर्छ । अन्यथा, तपाईंको वाणी शासकहरूले सुन्दैनन् ।
यसका खतरा पनि छन्, यो कसैको व्यापारको साधन हो । तपाईंका भावना, विचार कसैका लागि व्यापार हुन् । तर, अहिलेको युगमा कहाँ व्यापार छैन ? पत्रिकामा छापिनु व्यापार होइन कि अनलाइनमा अपलोड हुनु ? यो सञ्जालको दुर्गुणचाहिँ के भने यो बाहिर अरू कसैको नियन्त्रणमा छ । यसमा गएका विषय अरूकै सम्पत्ति बन्छन् । र, यसमा गलत कुरालाई पनि सत्यभन्दा चर्कोसँग फैलाउने शक्ति छ । यस अर्थमा फेरि सञ्जाल मित्थ्या छ ।
म्यानमारमा रोहिंग्याविरुद्ध दमन सुरु हुनुअघि फेसबुकमा प्रशस्तै हेटस्पिचहरू फैलाइएको थियो । रोहिंग्याविरुद्धका सन्देश फेसबुक र ह्वाट्एपबाटै छ्याप्छ्याप्ती बनाइएको थियो । यतिसम्म कि भोलि यो समयबाट आक्रमण गर्ने भन्ने पनि फेसबुकबाट फैलाइएको थियो । तर, फेसबुकले यस्तो हिंस्रक कुरालाई रोकेन । अमेरिकी पत्रकार डाना प्रिस्टको डक्युमेन्ट्रीमा फेसबुकका अधिकारीले यस विषयमा जवाफ दिएका छन्– स्थानीय भाषामा लेखिएको कुरा बुझ्ने मानिस नै हामीसँग थिएन । त्यो हाम्रो गल्ती भयो ।
फेसबुकका लागि सन्देशमा के लेखिएको छ भन्दा पनि त्यसले दिएको ‘इन्गेजमेन्ट‘ ठूलो कुरा थियो । किनभने, यो व्यापार हो । मित्थ्या समाचार फैलाउन पनि सञ्जालको निकै ठूलो भूमिका छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावदेखि नेपालमा हुने पार्टीको वडा चुनावसम्ममा फेक न्युज फैलाउनका लागि सबभन्दा बलियो र प्रभावकारी माध्यम यही सञ्जाल भएको छ ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालमा भएको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक परिवर्तन वैदेशिक रोजगारी हो । यसले युवाहरूलाई रोजगारी दियो । परिवारलाई समाजमा सम्मान, बाँच्ने आधार, एक टुक्रा जमिन र बस्ने एउटा ठाउँ दियो ।
बालबच्चालाई पढ्ने स्कुल, श्रीमतीलाई दाउरा बोक्ने र घाँस काट्ने कामबाट निकालेर बच्चालाई स्कुल लैजाने–ल्याउने काम दियो । घर–घरमा इन्टरनेट र हात–हातमा मोबाइल पुर्‍याउन वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाभन्दा बढी के–को योगदान होला ? नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट रकम आउने परिवारको संख्या ५६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । बहुमतभन्दा बढी परिवारको आयको मुख्य स्रोत यही हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर वैदेशिक रोजगारीको योगदान छ ।
सबभन्दा ठूलो योगदानचाहिँ यसले मानिसलाई आत्मविश्वास दिएको छ । राज्यले सबभन्दा कम लगानी गरेको वर्गका युवाले अहिले सरकारहरूलाई पाल्ने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनहरूले दिएको चेतना र वैदेशिक रोजगारीले दिएको आर्थिक आडभरोसाका कारण समाजको तल्लो तहमा रहेका मानिसहरू बोल्न सक्ने भएका हुन् भन्न सकिन्छ । नियालेर अध्ययन गर्नेहरूले भन्न सक्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा/युवतीका ५६ प्रतिशत परिवार उपल्लो वर्गका होइनन् (युरोप/अमेरिकातिर जाने थोरैबाहेक) ।
निम्न वर्ग र निम्नमध्यम वर्गका, देशमै रोजगारी र अवसर नपाएका/नपाउने, दलित र पिछडा वर्गका मानिसका लागि वैदेशिक रोजगारी एक मात्रै बाटो देखिन्छ । आफ्नो देश र परिवार छोडेर झन्डै १ सय ७२ देशमा फैलिएका नेपाली युवाका लागि पनि सञ्जाल नै आफ्नो समाजसँग जोडिने माध्यम हो । यिनले नै पठाउने पैसाले यिनको परिवार, शासक वर्ग र व्यापारी वर्गको कारोबार चलिरहेको छ । यही पैसाले अन्ततः समाजलाई उठाएर सामाजिक सञ्जालमा पुर्‍याइदिएको छ ।
र, हाम्रो समयको क्रान्ति सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । जुन मित्थ्या भए पनि यसले सत्यको स्वाद दिइरहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ १३:५१
जुगौं लामो एक दिनको कथा
‘उडिजाऊँ जहाज पाउँदैन, गुडिजाऊँ एम्बुलेन्स आउँदैन’
एउटा विद्यालयको कायाकल्प
जिल खानुका विरुद्ध
मैले प्रेम गरेका रूखहरू
जब सिकारी किसान बने